Al Shabaab oo Sheegtay Qaraxii ka dhacay Muqdisho | Somalisan.com
Home Afsomali Al Shabaab oo Sheegtay Qaraxii ka dhacay Muqdisho
Al Shabaab oo Sheegtay Qaraxii ka dhacay Muqdisho
Xarakada Al Shabaab ayaa durba sheegatay masuuliyada qarax ismiidaamin ah oo barqadii maanta ka dhacay Koontarool laga ilaaliyo Madaxtooyada Soomaaliya oo kuyaala agagaarka Isgooska Sayidka ee magaalada Muqdisho.
Bayaan kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu sheegay in qarax ku weerareen koontarool laga ilaaliyo Madaxtooyada oo kuyaala Isgooska Sayidka, waxa ayna Al Shabaab sheegeen in qaraxa lagu dilay sidoo kale lagu dhaawacay xubno katirsan dowlada.
Al Shabaab ayaa sheegtay in goobta qaraxa lala beegsaday ay xiligaasi ku sugnaayeen masuuliyiin katirsan dowlada ay ku jiraan Xildhibaano kuwaa oo kusii jeeday xarunta Madaxtooyada.
Weerarkan ismiidaaminta ah ee Al Shabaab maanta ku qaaday koontaroolka laga ilaaliyo xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhaliyay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana dadka dhintay ku jiray agaasime katirsanaa Wasaarada haweenka.
Previous articleMagacyada Masuuliyiintii ku geeryootay DAAWA SAWIRADA
Next articleexplosion in Mogadishu and government officials killed
Qatar Charity (QC), with the support of people in Qatar, has inaugurated a mosque...
Somalisan News - June 19, 2019
Xilwareejin Muqdisho ka dhacday (DAAWO SAWIRADA )
Somalisan News - January 11, 2019
Qoryooley caruur ku geeriyootay qarax ka dhashay bambaano weyn oo ay ku cayaarayeen
Somalisan News - January 8, 2019